Imibuzo evame ukubuzwa - Shanghai Yangli Furniture Material Co., Ltd.
1. Ingabe ukuhweba inkampani noma manufactur?
Singabantu professional ifenisha hardware nomkhiqizi kusukela ngo-1999.
Sicela usithumele i-oda lakho lokuthenga nge-imeyili noma ngefeksi, noma ungasicela ukuthi sikuthumele i-Performa Invoice ye-oda lakho. Sidinga ukwazi imininingwane elandelayo ye-oda lakho:
1) Imininingwane yomkhiqizo: Ubuningi, ukucaciswa (usayizi, okokusebenza, umbala, ilogo nemfuneko yokupakisha), Ubuciko noma iSampula kuzoba okungcono kakhulu.
2) Isikhathi sokulethwa siyadingeka.
3) Imininingwane yokuthumela: Igama lenkampani, ikheli, inombolo yocingo, itheku lokuya / isikhumulo sezindiza.
4) Imininingwane yokuxhumana nomhambisi uma kukhona eChina.
3. Iyini yonke inqubo yokwenza ibhizinisi nathi?
1. Okokuqala, sicela unikele ngemininingwane yemikhiqizo oyidingayo esikucaphuna yona.
2. Uma intengo yamukelekile futhi iklayenti lidinga isampula, sinikeza i-Performa Invoice yeklayenti ukuhlela ukukhokhelwa kwesampula.
3. Uma iklayenti ligunyaza isampula futhi lifuna uku-oda, sizohlinzeka ngePerforma Invoice yeklayenti, futhi sizohlela ukukhiqiza ngasikhathi sinye lapho sithola idiphozi engama-30%.
4. Sizothumela izithombe zazo zonke izimpahla, ukupakisha, imininingwane, kanye nekhophi le-B / L leklayenti ngemuva kokuphela kwempahla. Sizohlela ukuthunyelwa futhi sinikeze nge-B / L yangempela lapho amaklayenti ekhokha ibhalansi.
4. Ngabe ilogo noma igama lenkampani lingaphrintwa kumikhiqizo noma iphakethe?
Impela. Igama lakho noma igama lenkampani lingaphrintwa kwimikhiqizo yakho ngokugxiviza, ukuphrinta, ukufaka embossing noma isitikha. Kodwa MOQ kumele ibhola eziveza amaslayidi ngenhla 5000 amasethi; isilayidi esicashile ngenhla kwama-2000 amasethi; amaslayidi odonga aphindwe kabili ngaphezu kuka-1000; amahinji kuhhavini ngenhla 10000 amasethi; amahenjisi ekhabethe ngaphezulu kwama-10000 pcs njll.
5. Iyini imigomo yakho yokukhokha?
Inkokhelo <= 1000USD, 100% kusengaphambili. Inkokhelo> = 5000USD, 30% T / T kusengaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Uma unomunye umbuzo, ama-pls akhululeke ukuxhumana nathi nge-imeyili: yangli@yangli-sh.com.
6. Iziphi izinzuzo esinazo?
1. I-QC eqinile:Nge-oda ngalinye, ukuhlolwa okuqinile kuzokwenziwa ngumnyango we-QC ngaphambi kokuthumela. Ikhwalithi embi izogwemeka ngaphakathi komnyango.
Ukuthumela: Sinomnyango wokuthumela nokuthumela phambili, ngakho-ke singathembisa ukulethwa ngokushesha futhi senze izimpahla zivikelwe kahle.
3. Ukukhiqizwa kwethu kwemboni okwenziwe ngobungcweti kufihliwe amaslayidi ekhabethe, amaslayidi wokuthwala ibhola, amaslayidi wetafula namahinji ehovini kusukela ngo-1999.
7. Kungani isilayidi sokuvala esithambile singakwazi ukusebenza kahle?
Isizathu sokungasebenzi kahle kwesilayidi esivamile kuvame ukuvela kulezi zinto ezilandelayo ngesikhathi sokufakwa, sicela uhlole ngokulandela izinqubo ezilandelayo:
(1) Bheka i-Side Space (clearance).
Okokuqala hlola isikhala esiseceleni phakathi kwekhabethe nekhabethe kungaphakathi kokubekezelelana. Uyacelwa ukuthi ubheke ukuhambisana kwesikhala somkhiqizo ohlangothini (imvume) kwiFenisha, Ikhasi lezinsiza zeKhishi. Sicela uxhumane nomenzi wekhabhinethi uma isikhala sohlangothi lwekhabhinethi (imvume) ingu-1mm omkhulu kunokubekezelelana kohlangothi okukhethiwe.
(2) Hlola ukwakheka ngokunemba kwekhabethe kanye nedilowa.
Uma ukubekezelelana okunesikhala sendawo eseceleni (imvume) kungaphakathi kwe-1mm, sicela ulandele isiqondiso sokuxazulula inkinga ukwenza ukuhlolwa kwekhabinethi ukuqinisekisa ukuthi ikhabethe lakha ukunemba kwekhabethe. IKhabhinethi kanye nedilowa kumele kube sesimweni esifanelekile esiyisikwele nasonxande. Uma idrowa noma ikhabethe lingalingani noma lisesimweni sedayimane, lizothinta ukusebenza kwesilayidi sokuvala esithambile.
(3) Hlola ukufakwa kwesilayidi sedilowa
Ukuze ukhulule idrowa nekhabethe, cindezela ithebhu yokukhishwa kwelungu elingaphakathi bese ukhipha idrowa ukuze ukhiphe. Qiniseka ukuthi ilunga eliphakathi nelangaphandle liyafana futhi liyalinganiswa, nokuthi ilungu elingaphakathi lihlelaniswe ngokuqinile futhi lilinganiswe kahle. Imininingwane yokufakwa kwesilayidi izothinta ukusebenza kwesilayidi. Uma ikhabethe lakho lihlangabezana nazo zonke izidingo ezibalulwe ngenhla, nezinkinga zisekhona, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi, futhi kuzobekwa onguchwepheshe ozokusiza
Ukuze iKhabhinethi ithobele imfuneko engenhla kepha ihluleke ukusebenza kahle, sicela uxhumane nathi ukuthola olunye usizo lochwepheshe.
8. Kungani i-Push slide evulekile inebanga lokukhishwa elifushane, noma ingakwazi ukwenza umsebenzi ovulekile?
I-Push Open Slide ngeke isebenze kahle uma isikhala sohlangothini (imvume) singaphandle kokubekezelelana okucacisiwe. Sicela ubheke imininingwane yomkhiqizo ekhasini lefenisha yekhishi lefenisha.
9. Ngingawuxazulula kanjani umsindo wesilayidi esivulekile?
Isheke lokuqala lesilayidi eliphakathi nelangaphandle lifakiwe lalinganiswa futhi laqondaniswa nodonga lwekhabethe. Lapho isilayidi singafakiwe kahle, umsindo ungavela ekuphazanyisweni kwendlela, ngaleyo ndlela unciphise ibanga lokukhishwa kwesilayidi.